Perikopa Jolay 2019. – FJKM
Misasaka ny taona, mandia ny volana fahafito ny Fiangonana, mibanjina ny lohahevitra hoe: “Manatrika ny mino ny Tompo” isika. Koa indro aseho amin’ity fafana ity ny hevi-dehibe tsy azo dinganina raha handinika ny Perikopa voalahatra araka ny Testamenta Taloha amin’izao volana izao isika.
Eksodosy 33, 7- 11 Zakaria 8, 1- 8 2 Tantara 6, 1- 6 Salamo 68, 7- 14
toerana ifanatrehan’ny mino amin’Andriamanitra “Trano lay fihaonana”: toerana natokan’ny olona (ohatra:IMosesy) hihaonana
amin’Andriamanitra (and.7) I Ziona na Jerosalema, ivo-toeran’ny fivavahana Jiosy. Toerana itoeran’ny fahamarinana sy ny fahamasinana (and.3) Toerana natokan’ny olona (ohatra: Solomona) (and. 2) Eny an-dalana: mialoha lalana ny olona eny am-pandehanany (and. 7)
Ny endrika isehoan’ny fihaonan’ny minoamin’ny Tompo Midina ny andri-rahona. (and. 10) Tandindon’ny fidinan’ny Fanahy Masina Miainga avy amin’ny fanatonan’ny Tompo ny olona ny fihaonana. Andriamanitra no manao ny dingana. Miampita amin’ny taranaka mandimby ny Tenin’Adriamanitra,dia amin’ireo taranaka mandimby (and.4- 5) Miseho amin’ny heriny Andriamanitra (and.8) Fiarahana mandeha amin’ny olony Izy.
Votoatin’ny fihaonana Fihaonan’ny Mpisakaiza (and.11) Fampanantenana ataon’Andriamanitra momba ny famonjena: Taranaka tsy ritra (and. 4- 5), famonjena (and. 7), famerenana ny fanekena (and.8) Fanamafisana ny fifidianan’Andriamanitra ny olona ho olony sy ny fanomezany mpitondra mifandimby (and. 5- 6) Firotsaham-pitahiana mamelona
ny olona (and. 9) Fanamafisan-toerana eo amin’izay misy azy (and. 10) Fandresena sy fanavotana (and. 11- 14)